April | 2016 | Hnin adventures
Seeing Burmese water festival after 12 years
April 18, 2016 empathy75	1 Comment
In April, I ended my career of 12 years , not because I cannot continue the same job but because I need to get out of comfort zone and do something different. So I came back from Malaysia and my friend Nadia from Mexico wanted to meet me in Yangon at the same time.
I thought it was unfortunate for her as the time of her visit coincide with the most severe Elnino in South East Asia. It was hardly any rain and the sun is blazing and its humid. But Nadia isamature traveller and she is not someone who is perturbed easily by any unwanted circumstances. She said withachuckle that “Don’t worry Hnin. I am used to deserts and temperature more than 40C”.
When she arrived, it was the last day of water festival. We celebrated water festival4days prior to our Burmese New Year. By the way, happy Burmese new year to readers. The reason we celebrare festival is to wash away our previous sins, grudge, negative feelings with water which purify our souls. This is the time we also try to follow5or 8 percepts of Buddhist rules , try to do fasting and meditation. During water festival, people are in great spirit, especially kids. They all will be drenched and soaked with water , but even how cold they are, every kid refuses to stop throwing water on passerbys or on each other until their parents force them to stop.
My nieces and nephews in bliss
Father and daughter enjoying Thingyan
Another thing is people try to joke around and make funny things. Its not uncommon to see the most quiet person dancing in the middle of the crowd in glee this special time. People are in great spirit and try to greet each other in very informal way . They also like to shake hands or hug to complete strangers and foreigners.
Children are usually the victims of adults teasing as they usually are captured and applied soot ( the black color carbon ) on their face against their will. Yes, itsabit harsh but extremely funny to see them.
Children covered with soot
For Nadia, its all new experience as she had never been in Burma although visiting here is always one of her bucket lists. I told her its better we walked around and felt the festival but she insisted to be in the car and watched as she did not want to get wet considering her recent flu.
However, her festival spirit became awaken when kids threw ice water fromacar and startled her. She asked me to ask water from the car ( usually people put water tank on their car) and splashed the water back to them
She was very happy. I encouraged her she can throw water on anybody and its not against the law. People were so happy when non Burmese involve in their festival.
Nadia splashing water to the kids
She was again poured icy water
We hiredataxi with 8000 kyats ( 8 us D) per hour as most taxi drivers were on holiday mood and unwilling to work. We went to the area near the lake opposite Sedona hotel as the area is quite scenic with lots of yellow color flowers which blossom only in April. We sawaforeigner wearing nothing but only shorts and chains of beer bottles on the neck. He was comoletely in bliss and not really intoxicated with alcohol. He smiled and took some of our pictures. This is the example of foreigners who enjoy water festival more than Burmese.
Nadia was happy as we stopped taxi in front of our national leader Aung San Suu Kyi house and took photo. Daw Suu was house arrested for two decades in her house and the house became one of Burma’s historic places. There wasatime when everybody who visited her was investigated or even disturbed by authority previously. Daw Suu likes to stand at the gate and give inspiring speech toalarge crowd who never fail to support her.
Time has changed and opposition party has become the goverment. Daw Su house was deserted as she now resides in Nay Pyi Daw, our new capital.Now there is freedom and nobody will interrogate you if you stand in front of the house and take the photo.
We went to downtown near Su Le pagoda and watched the performance. The people were sprawling or sitting on the lawn , being relaxed and watching the jokes and satires of the performers. For many years , any performance or jokes against the previous goverment was restricted and seeing artists making satires or chanting lyrics this year make us realize we are finally approaching the real democracy we wanted for past 50 years.
Another thing which is wonderful about this year festival is people are well disciplined and try to clean up all the rubbish on their own. It’s amazing to see all citizens are trying to change in positive ways.
citizens cleaning on their own
after cleaning. It took only 30 minutes. ☺
There is alsoanew event called Yangon water splash walk which is organized by highly spirited young people who walk around Yangon Area throwing water all the way to the people who were walking and parading in their cars. At last, the number of people exceeded more than 1000 but none of them showed mob like behavior and onlookers cheered them from their houses and balconies.
Yangon Water Splash Walk 2016
ဒီ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မြန်မာသင်္ကြန်မှာ ကျွန်တော်တော့ ထူးထူးခြားခြားအစီအစဉ်လေးတစ်ခုမှာ ပါဝင်ဖြစ်သွားတယ်။ ခရီးထွက်နေရာကနေ သင်္ကြန်မမီလောက်တော့ဘူး ထင်နေခဲ့တာ လေယာဉ်လက်မှတ်ပြန်ကြည့်တော့မှ သင်္ကြန်အတက်နေ့ နေ့လည် ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ပထမဆုံးစဉ်းစားဖြစ်တာက မဏ္ဍပ်သွားဖို့ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူငယ်ချင်း ဟိန်းဇော်ညိုက ရန်ကုန်မှာ Yangon Splash Walk ဆိုတဲ့ activity တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာလေးရေးထားတာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်ကတည်းက အဲဒီ Event ရှိကြောင်းကို တွေ့နေမြင်နေရပေမယ့် အချိန်မီ၊ မမီ မသေချာလို့ Going မလုပ်ထားခဲ့မိဘူး။ သူငယ်ချင်း ဖိုးသားနဲ့ ကိုနေ တို့ကလည်း သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ နောက်ဆုံး မဏ္ဍပ်မထိုင်တော့ဘဲ ဒီ Activity မှာ ပါဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။.Water Splash Walk လှုပ်ရှားမှုရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၉၀ ခုနှစ်အစဦးတုန်းက ကလေးဘဝမှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ လွယ်အိတ်ထဲ ရေပုံးထည့်ပြီး ရေပြွတ်တွေ၊ ရေသေနတ်တွေနဲ့ မြို့ထဲလမ်းတွေပေါ်၊ ရပ်ကွက်ထဲ လျှောက်သွားပြီး စစ်တိုက်သလိုပဲ ကိုယ်တွေလိုကလေးတွေ တွေ့ရင် ရေနဲ့ အပြိုင်ပက်ကြတာမျိုးကို ပြန်ပြီး အမှတ်တရ ဖော်ထုတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးပါ။ မှတ်မိသေးတယ်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း စတီးပြွတ်တွေနဲ့ သိပ်ပျော်ခဲ့တာ။ အုန်းလက်မဏ္ဍပ်တွေနဲ့ ပြိုင်ပက်ရရင်တော့ မစားသာဘူးလေ။ ကိုယ်တွေ သူငယ်ချင်းအုပ်တောင့်ရင်တော့ တစ်ဘက်က အဖွဲ့ ခံပေရော့ပဲ။ ကိုယ်တွေ သူငယ်ချင်းအုပ်မတောင့်ရင်တော့လည်း ခံပေါ့။ ဒီ Water Splash Walk ရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ဒီပုံရိပ်တွေက ဆေးရောင်စုံရုပ်ရှင်ဟောင်းတစ်ခုကို ပြန်ကြည့်နေရသလို အဝါရောင်ခပ်များများနဲ့ မျက်စိထဲ ပေါ်လာစေတယ်။.နေ့လည် ၁ နာရီလောက်မှ လေယာဉ်ဆိုက်တော့ အိမ်ကို အပြေးအလွှားရေချိုးပြန်ရတယ်။ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းထားတဲ့ Sule Shangrila ကို အရင်သွား၊ အဲဒီကနေမှ စုရပ်နေရာဖြစ်တဲ့ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းပေါ်ကို အပြေးလာရတယ်။ နေ့လည် ၃ နာရီလောက်မှ လူအုပ်က ခပ်များများဖြစ်နေပြီ။ အားလုံးက ရေသေနတ်လေးတွေကိုယ်စီနဲ့၊ အရက်မူးနေပုံ မရှိဘဲ ပကတိဖြူစင်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ပုံရိပ်မျီုးတွေက အားလုံးမှာ တွေ့ရတယ်။ ဝတ်စုံအဆန်းအပြားလေးတွေနဲ့ တွေ့ရသလို၊ ရေသေနတ်မပါသူတွေကလည်း ရေသန့်ဘူးကို ထိပ်ဖောက်ပြီး ရေသေနတ်လုပ်လို့ ရေဆော့နေကြတယ်။ မကြီးစန်း တို့ ကိုပြည်စိုးအောင် တို့လို Celebrities တွေလည်း တွေ့ရတယ်။ သူတို့ဆိုလည်း လူတိုင်းက ချစ်ခင်စွာနဲ့ ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယိုတွဲရိုက်သမျှကို ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ လိုက်လျောလုပ်ဆောင်ပေးရှာပါတယ်။.အစီအစဉ်အရ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အထင်ကရ သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးတွေနဲ့ Splash Walkers တွေ တွဲဖက် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးဖို့ရှိတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ ရေသေနတ်တွေကိုယ်စီနဲ့ စုရပ် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းကနေ ပန်းဆိုးတန်းတစ်လျှောက်၊ ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း၊ သိမ်ဖြူလမ်းနဲ့ ကုန်သည်လမ်း၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းကနေမှ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းကို ပြန်ဝင်ရမှာပါ။ အဲဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်၊ မြို့တော်ခန်းမ၊ တရားလွှတ်တော်၊ လောကနတ်ပြခန်းအဆောက်အဦ၊ ဝဇီရာရုပ်ရှင်ရုံ၊ စိန့်မေရီဘုရာျးေကျာင်း၊ ဗဟိုပုံနှိပ်တိုက်၊ ဝန်ကြီးများရုံး၊ ဗဟိုစာတိုက်ကြီး၊ Strand ဟိုတယ် စတဲ့ သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံတွေကို နောက်ခံထားပြီး အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်။.လမ်းတစ်လျှောက်လည်း ရေလိုအပ်ရင်ဖြည့်ပေးဖို့ ရေဖြည့်တဲ့ကားတွေ စီစဉ်ပေးထားသလို၊ ငယ်ငယ်ကလိုပဲ တွေ့ကရာ အုန်းလက်မဏ္ဍပ်၊ မဏ္ဍပ်ကြီးတွေမှာ အားမနာတမ်း ရေတောင်းပြီးလည်း ဖြည့်ကြပါတယ်။လူပေါင်းရာချီလို့ တညီတညွတ်တည်း လျှောက်သွားနေကြတာကို အချို့ကလည်း ဆန္ဒပြသလားပေါ့။ ဝိုင်းအုံကြည့်ကြ၊ ဓါတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ကြနဲ့။ ရီလည်း ရီရပါတယ်။ရဲ အချို့ရဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေလည်း ခံခဲ့ရသလို၊ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ နဲ့ ရဲတွေရဲ့ အကူအညီပေးမှုကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။.ညနေ ၆ နာရီ ရေပိတ်ချိန် ကွက်တိလေး မူလစုရပ်နေရာပြန်ရောက်ပြီး အားလုံးချစ်ခင်စွာနဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းလေးတွေဆိုလို့ လှုပ်ရှားမှုလေးကို ရပ်နားပါတယ်။ ပြီးတော့ အမှိုက်ကူကောက်ပေးတဲ့သူတွေကလည်း အမှိုက်လေးတွေကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ပြန်လိုက်သိမ်းဆည်းပေးကြပါတယ်။.ဒီအစီအစဉ်မျိုးလေးတွေ နှစ်တိုင်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ထောက်ခံမိပါတယ်။ တစ်ခုပဲ အရင်ကလို လမ်းတိုင်း ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ အုန်းလက်မဏ္ဍပ်တွေ ရှိမနေတော့တာမို့ ရေတော်တော်နဲ့ မစိုနိုင်တာကတော့ ခက်ပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်ထူးလေးတွေ ထပ်ပေါင်းဖြည့်ထည့်ပေးနိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပါ။ ခုထိကတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရေသေနတ်ကိုင်လမ်းလျှောက်ပြီး သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာကလွဲရင် သိပ်ပြီး ထူးခြားမှု မရှိသေးလို့ ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိမယ့် အစီအစဉ်လေးတွေကို စနစ်တကျ သေသေသပ်သပ်လေး ရေးဆွဲလို့ နောက်နှစ်တွေမှာ ပိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။.သီဟလုလင်#splashie #YangonSplashWalk #SplashWalker #Thingyan2016..[Unicode]ဒီ ၂၀၁၆ ခုနှဈ မွနျမာသင်ျကွနျမှာ ကြှနျတျောတော့ ထူးထူးခွားခွားအစီအစဉျလေးတဈခုမှာ ပါဝငျဖွဈသှားတယျ။ ခရီးထှကျနရောကနေ သင်ျကွနျမမီလောကျတော့ဘူး ထငျနခေဲ့တာ လယောဉျလကျမှတျပွနျကွညျ့တော့မှ သင်ျကွနျအတကျနေ့ နလေ့ညျ ပွနျရောကျမယျဆိုတာ သိလိုကျရတော့ ပထမဆုံးစဉျးစားဖွဈတာက မဏ်ဍပျသှားဖို့ပါ။ အဲဒီအခြိနျမှာ သူငယျခငျြး ဟိနျးဇျောညိုက ရနျကုနျမှာ Yangon Splash Walk ဆိုတဲ့ activity တဈခုရှိတယျဆိုတာလေးရေးထားတာ ဖတျလိုကျရတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ရကျအနညျးငယျကတညျးက အဲဒီ Event ရှိကွောငျးကို တှနေ့မွေငျနရေပမေယျ့ အခြိနျမီ၊ မမီ မသခြောလို့ Going မလုပျထားခဲ့မိဘူး။ သူငယျခငျြး ဖိုးသားနဲ့ ကိုနေ တို့ကလညျး သှားမယျဆိုတာနဲ့ နောကျဆုံး မဏ်ဍပျမထိုငျတော့ဘဲ ဒီ Activity မှာ ပါဝငျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။.Water Splash Walk လှုပျရှားမှုရဲ့ အဓိက ရညျရှယျခကျြက လှနျခဲ့တဲ့ ၉၀ ခုနှဈအစဦးတုနျးက ကလေးဘဝမှာ ခတျေစားခဲ့တဲ့ လှယျအိတျထဲ ရပေုံးထညျ့ပွီး ရပွှေတျတှေ၊ ရသေနေတျတှနေဲ့ မွို့ထဲလမျးတှပေျေါ၊ ရပျကှကျထဲ လြှောကျသှားပွီး စဈတိုကျသလိုပဲ ကိုယျတှလေိုကလေးတှေ တှရေ့ငျ ရနေဲ့ အပွိုငျပကျကွတာမြိုးကို ပွနျပွီး အမှတျတရ ဖျောထုတျတဲ့ လှုပျရှားမှုလေးပါ။ မှတျမိသေးတယျ။ ကြှနျတျောငယျငယျတုနျးကလညျး စတီးပွှတျတှနေဲ့ သိပျပြျောခဲ့တာ။ အုနျးလကျမဏ်ဍပျတှနေဲ့ ပွိုငျပကျရရငျတော့ မစားသာဘူးလေ။ ကိုယျတှေ သူငယျခငျြးအုပျတောငျ့ရငျတော့ တဈဘကျက အဖှဲ့ ခံပရေော့ပဲ။ ကိုယျတှေ သူငယျခငျြးအုပျမတောငျ့ရငျတော့လညျး ခံပေါ့။ ဒီ Water Splash Walk ရဲ့ ကြေးဇူးနဲ့ ဒီပုံရိပျတှကေ ဆေးရောငျစုံရုပျရှငျဟောငျးတဈခုကို ပွနျကွညျ့နရေသလို အဝါရောငျခပျမြားမြားနဲ့ မကျြစိထဲ ပျေါလာစတေယျ။.နလေ့ညျ ၁ နာရီလောကျမှ လယောဉျဆိုကျတော့ အိမျကို အပွေးအလှားရခြေိုးပွနျရတယျ။ ပွီးတော့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ခြိနျးထားတဲ့ Sule Shangrila ကို အရငျသှား၊ အဲဒီကနမှေ စုရပျနရောဖွဈတဲ့ မဟာဗန်ဓုလပနျးခွံလမျးပျေါကို အပွေးလာရတယျ။ နလေ့ညျ ၃ နာရီလောကျမှ လူအုပျက ခပျမြားမြားဖွဈနပွေီ။ အားလုံးက ရသေနေတျလေးတှကေိုယျစီနဲ့၊ အရကျမူးနပေုံ မရှိဘဲ ပကတိဖွူစငျနတေဲ့ ကလေးငယျတှရေဲ့ ပုံရိပျမြီုးတှကေ အားလုံးမှာ တှရေ့တယျ။ ဝတျစုံအဆနျးအပွားလေးတှနေဲ့ တှရေ့သလို၊ ရသေနေတျမပါသူတှကေလညျး ရသေနျ့ဘူးကို ထိပျဖောကျပွီး ရသေနေတျလုပျလို့ ရဆေော့နကွေတယျ။ မကွီးစနျး တို့ ကိုပွညျစိုးအောငျ တို့လို Celebrities တှလေညျး တှရေ့တယျ။ သူတို့ဆိုလညျး လူတိုငျးက ခဈြခငျစှာနဲ့ ဓါတျပုံ ဗီဒီယိုတှဲရိုကျသမြှကို ပွုံးပွုံးလေးနဲ့ လိုကျလြောလုပျဆောငျပေးရှာပါတယျ။.အစီအစဉျအရ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အထငျကရ သမိုငျးဝငျအဆောကျအဦးတှနေဲ့ Splash Walkers တှေ တှဲဖကျ အမှတျတရ ဓါတျပုံရိုကျကူးဖို့ရှိတယျ။ ဒီအစီအစဉျမှာ ရသေနေတျတှကေိုယျစီနဲ့ စုရပျ မဟာဗန်ဓုလပနျးခွံလမျးကနေ ပနျးဆိုးတနျးတဈလြှောကျ၊ ပွီးတော့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးလမျး၊ ဗိုလျအောငျကြျောလမျး၊ အနျောရထာလမျး၊ သိမျဖွူလမျးနဲ့ ကုနျသညျလမျး၊ ကမျးနားလမျး၊ ဆိပျကမျးသာလမျးကနမှေ မဟာဗန်ဓုလပနျးခွံလမျးကို ပွနျဝငျရမှာပါ။ အဲဒီလမျးတဈလြှောကျမှာရှိတဲ့ လှတျလပျရေးကြောကျတိုငျ၊ မွို့တျောခနျးမ၊ တရားလှတျတျော၊ လောကနတျပွခနျးအဆောကျအဦ၊ ဝဇီရာရုပျရှငျရုံ၊ စိနျ့မရေီဘုရားကြောငျး၊ ဗဟိုပုံနှိပျတိုကျ၊ ဝနျကွီးမြားရုံး၊ ဗဟိုစာတိုကျကွီး၊ Strand ဟိုတယျ စတဲ့ သမိုငျးဝငျအဆောကျအအုံတှကေို နောကျခံထားပွီး အမှတျတရဓါတျပုံရိုကျကွပါတယျ။.လမျးတဈလြှောကျလညျး ရလေိုအပျရငျဖွညျ့ပေးဖို့ ရဖွေညျ့တဲ့ကားတှေ စီစဉျပေးထားသလို၊ ငယျငယျကလိုပဲ တှကေ့ရာ အုနျးလကျမဏ်ဍပျ၊ မဏ်ဍပျကွီးတှမှော အားမနာတမျး ရတေောငျးပွီးလညျး ဖွညျ့ကွပါတယျ။လူပေါငျးရာခြီလို့ တညီတညှတျတညျး လြှောကျသှားနကွေတာကို အခြို့ကလညျး ဆန်ဒပွသလားပေါ့။ ဝိုငျးအုံကွညျ့ကွ၊ ဓါတျပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတှေ ရိုကျကွနဲ့။ ရီလညျး ရီရပါတယျ။ရဲ အခြို့ရဲ့ စဈဆေးမေးမွနျးတာတှလေညျး ခံခဲ့ရသလို၊ ယာဉျထိနျးရဲတှေ နဲ့ ရဲတှရေဲ့ အကူအညီပေးမှုကိုလညျး ရရှိခဲ့ပါတယျ။.ညနေ ၆ နာရီ ရပေိတျခြိနျ ကှကျတိလေး မူလစုရပျနရောပွနျရောကျပွီး အားလုံးခဈြခငျစှာနဲ့ သင်ျကွနျသီခငျြးလေးတှဆေိုလို့ လှုပျရှားမှုလေးကို ရပျနားပါတယျ။ ပွီးတော့ အမှိုကျကူကောကျပေးတဲ့သူတှကေလညျး အမှိုကျလေးတှကေို ကိုယျ့သဘောနဲ့ကိုယျ ပွနျလိုကျသိမျးဆညျးပေးကွပါတယျ။.ဒီအစီအစဉျမြိုးလေးတှေ နှဈတိုငျးပွုလုပျပေးနိုငျရငျ ကောငျးတယျလို့ ကြှနျတျောတော့ ထောကျခံမိပါတယျ။ တဈခုပဲ အရငျကလို လမျးတိုငျး ရပျကှကျတိုငျးမှာ အုနျးလကျမဏ်ဍပျတှေ ရှိမနတေော့တာမို့ ရတေျောတျောနဲ့ မစိုနိုငျတာကတော့ ခကျပါတယျ။ ထူးခွားတဲ့ အစီအစဉျထူးလေးတှေ ထပျပေါငျးဖွညျ့ထညျ့ပေးနိုငျရငျတော့ ပိုကောငျးမှာပါ။ ခုထိကတော့ ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ရသေနေတျကိုငျလမျးလြှောကျပွီး သမိုငျးဝငျအဆောကျအဦးတှနေဲ့ ဓါတျပုံရိုကျရတာကလှဲရငျ သိပျပွီး ထူးခွားမှု မရှိသေးလို့ ပိုပွီးဆှဲဆောငျမှုရှိမယျ့ အစီအစဉျလေးတှကေို စနဈတကြ သသေသေပျသပျလေး ရေးဆှဲလို့ နောကျနှဈတှမှော ပိုပွီးလုပျဆောငျနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ။.သီဟလုလငျ
Posted by Thiha Lu Lin on Sunday, April 17, 2016
The above video showed how they organized water splash walk.
My friend Nadia went to Shwedagone pagoda for the second time on first day of New Year and she was awed by generosity of the public towards the pilgrims as there were many donors distributing various kinds of food at the pagoda.
distribution of food at Shwedagone ( photo credit to Nadia)
All in all, 2016 water festival radiated hope and positivity in Burma.
Festive moodHappy go lucky peopleNew year and new hopesPositive changes in Burma